Amacandelo okuthintela kwimarike yemasheya kulo nyaka | Ezezimali
Nangona ii-equity ziqhuba kakuhle kakhulu, akubalulekanga kangako ukuba izilungiso kwikota yesibini yonyaka zibaluleke kakhulu. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba kunokubangela abatyali zimali abancinci nabaphakathi abathathe izikhundla kulo nyaka. Esi sisizathu esifanelekileyo sokubonisa ukuba zikhona amacandelo esitokhwe anobungozi kunabanye kwaye ke ngoko kufuneka kuthintelwe phantsi kwazo zonke izinto ezinokwenzeka.
Apho, kwimeko yelahleko yokuxabiseka kwintengiselwano yesitokhwe, akukho mathandabuzo okuba banokuba nokusebenza kakubi kunolunye ukhuseleko. Apho kungabikho xesha kuya kufuneka ubekwe kuba umngcipheko uphezulu kakhulu. Ukuya kwinqanaba lokuba inakho shiya i-euro eninzi endleleni kwaye le yimeko ekufuneka ithintelwe kuzo zonke iindleko. Nangona esiphelweni sosuku yonke into iyakuxhomekeka ekubeni impendulo yokugqibela yeemarike zezabelo zeziphi kwiinyanga ezizayo. Apho umbono ungathandekiyo okwangoku.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba ngalo mzuzu kukho amanye amacandelo akwindlela ecacileyo yokunyuka. Ngelixa abanye ngokuchaseneyo, oko kukuthi kwimeko ye-bearish kwaye inokumisela leyo ingaba urhwebo lwempahla elungileyo luyenziwa okanye cha. Ngaphandle kwezinye izinto zobuchwephesha ezinokuthi zichonge nokuxabiseka kwamaxabiso esitokhwe. Kuyo nayiphi na imeko, kuyakubaluleka kakhulu ukufumana izindululo ezinomngcipheko omkhulu ukuze sahlule kwipotfoliyo yethu elandelayo yotyalo-mali kwixesha elifutshane neliphakathi.
1 Amacandelo okuphepha: ubuchwepheshe obutsha
2 Iibhanki, kungcono
3 Umbane: bavukile kakhulu
4 Iinkampani ezijikelezayo: abalahlekileyo
5 Uthethathethwano luyonyuswa
Amacandelo okuphepha: ubuchwepheshe obutsha
Icandelo leetekhnoloji ezintsha libe lelinye lezona zinto zixabisekileyo kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo kwaye ke oko kufuna njalo ukulungiswa okukhulu. Ngokukodwa ukuba kukho utshintsho kwindlela yokuthengisa kwiimalike zamazwe ngamazwe. Ukuya kwinqanaba lokuba olu didi lwamaxabiso lunokwehla ngokujikeleza amanani kwaye ngenxa yoko kukho imali eninzi ongaphulukana nayo. Ngokuqinisekileyo, akufanelekanga ukuba uzibeke kwezinye zezindululo ezinobundlongondlongo eziphakame kakhulu kubushushu bokunyuka kokugqibela kwimarike yemasheya.
Ithamsanqa kwiminqweno yakho kukuba kwii-equities zaseSpain kunqabile ukhuseleko lwezi mpawu kwaye ke ngekhe uhendwe ukuba uthathe izikhundla kuzo. Apho ifayile ye- ukuguquguquka Alithandabuzeki elokuba yenye yezona zinto ziphambili zixhaphakileyo kuba kukho umahluko omkhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi. Njengoko ubona kwiitshathi zeenyanga ezidlulileyo kwaye iqwalaselwe njengenye yeengxaki ezifanelekileyo ukuba uvule izikhundla ukusukela ngoku. Ngayiphi na imeko, kungcono uyeke kwezi ntlobo zorhwebo kwimarike yemasheya.
Ngaphandle kokuhla koqingqo-maxabiso lweebhanki kunye namaqela ezezimali, akukho kungathandabuzeki ukuba oku kubonakala kungangunyaka olungileyo kwicandelo nokuba. Akumangalisi ukuba kukho amathandabuzo amaninzi anesisindo kula maxabiso abalulekileyo kuwo nawuphi na umvuzo oguqukayo emhlabeni. Kwaye apho umbono ubonakalisa ukuba bangaqhubeka nokuphulukana nezikhundla zabo ngenxa yezehlo eziphantsi kwazo izinto zebhanki. Musa ukuphenjelelwa Amaxabiso aphantsi abacaphula kuwo Ngeli xesha kuba ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukubabona benamaxabiso ahlengahlengiswe ngakumbi kumthetho wonikezelo kunye nemfuno.
Ngelixa ngokuchaseneyo, ayinakulityalwa ukuba eli licandelo lesitokhwe elingahambi kwelona xesha lihle. Hayi kangako. Ichaphazeleka kakhulu kukumiliselwa kwe inzala ephantsi kakhulu kummandla we-euro ukusukela ukuba umda wokungenelela ekunikezelweni kweekhredithi ngokungaphantsi uphantsi. Ngokuhla okubonakalayo kwenzuzo kwiziphumo zeekota ezimbalwa ezizayo kwaye ezinokuthatha amaxabiso abo ziye kumanqanaba asezantsi kunalawo abonisa ngalo mzuzu kanye. Ngaphandle kwezinye iintlobo zokuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwimbono yokujonga izinto ezisisiseko.
Umbane: bavukile kakhulu
Isizathu sokungathathi sikhundla kweli candelo lee-equities sihluke ngokupheleleyo kweleebhanki. Ngamanye amagama, ixabisile kakhulu kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo kwaye sele bebonisa ngokucacileyo iimpawu zokuba buthathaka kwiimarike zezemali. Ayililo ixesha elifanelekileyo lokuthatha izikhundla, ubuncinci emva kokufikelela kumaxabiso aphezulu onyaka. Ewe sele ufikile, kuthatha ixesha ukwenza ulondolozo lube nenzuzo ngezi zinto zifanelekileyo ezingxoweni. Nangona eyakhe isivuno sesahlulo yenye yezona ziphezulu, inomdla wokujikeleza i-6%.
Kwelinye icala, kuyimfuneko ukugxininisa ngokucacileyo ukuba oku licandelo elilawulwayo Kwaye le nto inokukwenzakalisa ukususela ngoku uye phambili kwiminqweno yakho. Kungenxa yokuba inokumangalela amanyathelo anokuthathwa ngurhulumente omtsha kwiinyanga ezizayo. Ngokukodwa emva kokufikelela kumanqanaba abaye bafikelela kweli candelo lonyaka. Ngelixa enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo yile ibhekisa kuzinzo lwayo olukhulu ngexesha lodweliso. Ke ngoko, asizukulindela ukonyuka okukhulu kula maxesha.
Iinkampani ezijikelezayo: abalahlekileyo
Kwimeko apho ukudodobala koqoqosho lwehlabathi kuqinisekisiwe, akukho mathandabuzo ukuba amaxabiso e-cyclical ayakuba njalo enye yezona zibetha kakhulu Ngexesha lokubeka amaxabiso abo. Batyekele ekuphuhliseni ukuwa okukhulu kula maxesha kwaye kwezinye iiseshoni zokurhweba kunokuba ngaphezulu kwe-5%. Ayiloxesha lokuba kule klasi yezokhuseleko kuba yimali eninzi ongaphulukana nayo ukusukela ngoku. Kwaye kuncinci kakhulu ukuzuza, njengoko kwenzekile kumaxesha angaphambili anokukunceda ukuba ulumke ngakumbi kunangaphambili.
Izitokhwe ezijikelezayo, kwelinye icala, zihlala zikhulisa iintshukumo ezinobundlobongela kumaxesha okudodobala kwezoqoqosho kwaye lo mba awunakulityalwa ukumisela ipotifoliyo elandelayo yotyalo-mali. Kunjalo aziloncedo kwezi vekiUkuba akunjalo, ngokuchaseneyo, akunakugwetywa ngaphandle ukuba amaxabiso abo aya kwehla ukuba kukho isiqinisekiso sikarhulumente omtsha woqoqosho lwamanye amazwe. Umzekelo, kukhuseleko lokufaneleka kweAcerinox okanye iArcelor Mittal ebonisa ukungazinzi okukhulu kwezi meko.
Ngaphandle kwalo naliphi na ixesha ukubheja okucacileyo okwenza ukuba inkunzi efumanekayo izuze kuba ayiloxesha elifanelekileyo lokuthatha izikhundla kule meko sikuyo. Nangona unokuba nesihendo maxa wambi sokuvula izikhundla kwezinye zezi zinto zixabisekileyo. Ngale ndlela, kunokuthiwa ngaphandle koloyiko lweempazamo ukuba ushiywe lixesha lokuba uthathe isikhundla ngeli xesha losuku. umjikelo wezoqoqosho. Kwelinye icala, kwiimeko ezininzi sele befikelele kumaxabiso ekujoliswe kuwo kwaye kuncinci kakhulu ukubanakho ukuxabisa abanayo ngoku. Awunakukhetha ngaphandle kokulinda ithuba elingcono. Ukuba awufuni nanye into engalindelekanga kwezi nyanga zimbalwa zizayo kwaye uthandabuzayo inganikwa. Njengoko izikhombisi zecandelo zibonisa. Kubhetele kakhulu ukuba ujonge.
I-Spanish Stock Market ithengise i-34.680 yezigidi zeerandi zizonke ngo-Matshi, eyi-7,2% ngaphezulu kunangoFebruwari kunye ne-29,6% engaphantsi kwenyanga enye yonyaka ophelileyo. Inani lothethathethwano ikhule nge-12,5% ​​xa kuthelekiswa noFebruwari, ukuya kuthi ga kwi-3,1 yezigidi, i-17,8% ingaphantsi kuno-Matshi 2018. Ibex yexesha elizayo 69,8 Ukwahlulahlula iimpembelelo, ngama-35%. Ibonisa ukuba sisiqalo esihle sonyaka ukulungiselela umdla wabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Kude kube ngoku, inzuzo yentengiso yesitokhwe yaseSpain ikwidijithi eziphindwe kabini nangona imeko yezoqoqosho ikwi inkqubo ye-frank deceleration. Esi sisizathu esilahlekise indawo elungileyo yeearhente zeemarike zezimali ezingayiqondiyo indlela imarike yemasheya enokunyuka ngayo ngalo mzuzu. Ke ngoko, bacebisa isilumkiso esikhulu ukusukela ngoku ukusikwa kwamaxabiso ezabelo kunokuba kubaluleke kakhulu. Kwaye apho abatyali mali abancinci nabaphakathi abakwimeko yokufumana imali iyonke banokuthatha ithuba. Ngamanye amagama, ngaphandle kweemarike ze-equity, nokuba kukwelizwe okanye ngaphandle kwemida yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Amacandelo okuphepha kwimarike yemasheya kulo nyaka